Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ụlọ ọrụ na-emetụta mmadụ
Ụlọ ọrụ FII esorola mahadum Mohammed VI Polytechnic University, HEC-Paris na akwụkwọ akụkọ sayensị na-eduga na Nature. O kwela nkwa nkwado dị ukwuu maka nyocha ike dị ọcha a na-eme na Stanford's Precourt Institute for Energy.
Onye isi oche nke Mohammed VI Polytechnic University (UM6P), Hicham El Habti kwuru na ọ "na-atụ anya ịhụ UM6P na FII na-aga n'ihu na-esonyere mgbalị iji mee mmetụta site n'ịtụ egwu, ịnwale na ịkpaghasị. Enwere m obi ike na mmekorita a ga-enyere anyị aka iru ebumnuche nke ịbụ ndị na-emepụta mmetụta site na nyocha ọhụrụ, iwulite ikike, agụmakwụkwọ na itinye ego na ọdịnihu. "
Onye isi mbipụta na ihe ngwọta nke Springer Nature, Steven Inchcoombe, kwuru, sị: "Site na mmekorita a, anyị bu n'obi inye ndị na-eme nchọpụta na ndị isi mkpebi ihe ọmụma ha nwere ike iji mee ka ngwọta maka nsogbu ndị isi obodo."
Banyere FII Institute
Anyị nọ n'ebe kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị - mgbe ndị na-eme mkpebi, ndị na-etinye ego na ọgbọ ntorobịa na-agbakọta ọnụ na ọchịchọ, ume na njikere maka mgbanwe. Anyị na-etinye ike ahụ n'ime ogidi atọ - THINK, XCHANGE, ACT - ma tinye ego na ihe ọhụrụ na-eme mgbanwe n'ụwa nile.